Router က | October 2019
Troubleshooting Router က TP-Link ကို
ယင်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနေသော်လည်းတစ်ဦးသည် router device ကိုကဲ့သို့သောရှုမြင်တဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အိမ်မှာဒါမှမဟုတ်ရုံးထဲမှာ router ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့တာဝန်ရှိအခန်းကဏ္ဍ, ပေးထားသော၎င်း၏ဒုက္ခ-အခမဲ့ခွဲစိတ်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Router ကို၏ချွတ်ယွင်းနေတဲ့ကြိုးများနှင့်ကြိုးမဲ့ interface ကိုမှတဆင့်ဒေသခံကွန်ယက်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများရပ်နားခြင်းစေပါတယ်။
ချိန်ညှိခြင်း Router က TP-LINK TL-WR702N
ကြိုးမဲ့ Router TP-LINK TL-WR702N အဆိုပါအိတ်ကပ်ထဲတွင်နေရာနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကောင်းတစ်ဦးရဲ့အမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အားလုံးကိရိယာများပေါ်တွင်အင်တာနက်ကိုကျင့်သောအကျင့်ကို router ကို configure ပြုလုပ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအချိန် setup ကိုသင်တိုင်း router ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာ - သူဘယ်နေရာမှာမဆိုအခန်းထဲမှာအင်တာနက်ကျင့်သောအကျင့်ရပ်နေမည်သည့်နေရာတွင်ဆုံးဖြတ်ရန်။
တခါတလေအင်တာနက်များအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကေဘယ်လ်ချိတ်ဆက်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံသင်ပြုချင်နှင့်အခြားအရာတစ်ခုခု။ PPPoE ဆက်သွယ်မှု, L2TP နှင့် PPTP အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ မကြာခဏဆိုသလိုအင်တာနက်ကိုပံ့ပိုးပေး router များ၏တိကျသောမော်ဒယ်များ configuring ဘို့ညွှန်ကြားချက်ပေးပါသည်, သင်မူကားထူထောင်ရန်လိုအပ်ရာ၏နိယာမကိုနားလည်လျှင်, လုနီးပါးမည်သည့် router ကိုအပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
Modem ကို Huawei က HG532e တက် Set
တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ cable ကိုကျော်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကွန်နက်ရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းလိုင်း, Wi-Fi ကို၏အင်တာနက်ကိုဖြန့်ဖြူးအဖြစ် IPTV ထောက်ခံမှု: Huawei က HG532e device ကိုအင်္ဂါရပ်များအခြေခံထားနဲ့ modem-Router ကဖြစ်ပါတယ်။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းနှင့်အမျှအလားတူကိရိယာများကိုသတ်မှတ်ထားအလွန်ရိုးရှင်းပြီးပေမယ့်တချို့လူတွေနေဆဲအခက်အခဲရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း - ဤပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ဒီလမ်းညွှန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
Router ကို ASUS က RT ကို-N10 Configuring
Router သည်ထိုင်ဝမ်ကော်ပိုရေးရှင်း ASUS က၏မော်ဒယ် number ကိုကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းအမျိုးအစားကနေဖြေရှင်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ RT-N10 နံပါတ် device ပျမ်းမျှလူတစ်ဦး router များ၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်နှင့်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအနိမ့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်: 150 MB / s ဆက်သွယ်မှုနှုန်းခေတ်မီစံချိန်စံညွှန်းများဆက်သွယ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးကိုထောကျပံ့, ကြီးမားတဲ့တိုက်ခန်းသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ရုံးအဖြစ် bandwidth ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များအတွက် wireless network ကိုလွှမ်းခြုံဧရိယာ ချွတ်နှင့် WPS ။
D-Link ကို DIR-300 router ကိုချိန်ညှိခြင်း
Router ကို၏ဝယ်ယူအောက်ပါသာထို့နောက်သူကမှန်မှန်ကန်ကန်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအားလုံးလုပ်ဆောင်ဖြစ်မည်, ကို set up နှင့် configure ရပါမည်။ configuration အရှိဆုံးအချိန်ကြာခြင်းနှင့်မကြာခဏအတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများထံမှမေးခွန်းထုတ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွင်ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည် Router ကမော်ဒယ် DIR-300 D-Link အားဖြင့် powered ဖြစ်ပါတယ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဥပမာယူပါလိမ့်မယ်။
Router ကို TP-Link ကို TL-WR740n Configuring
Router TP-Link ကို TL-WR740n အင်တာနက်က Shared access ကိုပေးဘို့တခုယန္တရားကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ထို့အပြင်သူသည် Wi-Fi router ကိုနှင့်ကွန်ယက် switch သည် 4-port ဖြစ်သည်။ 802.11n နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူအထိ 150 Mbit / s နှင့်တစ်ဦးတတ်နိုင်စျေးနှုန်း၏ကွန်ယက်ကိုအမြန်နှုန်း, ဒီကိရိယာကိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်း, ပုဂ္ဂလိကအိမ်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ရုံးတစ်ကွန်ယက်၏ဖန်တီးမှုတစ်ခုမရှိမဖြစ်ဒြပ်စင်ဖြစ်နိုင်သည်။
Router ကိုဖွင့်သတ်မှတ် UPVEL
UPVEL ကုမ္ပဏီကွန်ရက်ကပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏စာရင်းကိုအများအပြားအသုံးပြုသူများနှင့်လူကြိုက်များသည့် Router ကမော်ဒယ်တစ်ဦးအရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်။ အများဆုံး router များကဲ့သို့ဤထုတ်လုပ်သူများ၏ထုတ်ကုန်ထူးခြားတဲ့ web-based interface မှတစ်ဆင့် configured နေကြသည်။ ဒီနေ့သူတို့ရဲ့မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသေချာစေရန်ဒီအမျိုးအစားလွတ်လပ်သော devices များအတွက် configuration တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
နံပါတ်ရှာရန် Yota modem
Modem Yota က၎င်း၏အသုံးပြုသူများထံမှရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစက်ပစ္စည်းများအတွက်တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ , ဝယ်ယူမြန်နှုန်းမြင့်မှာအင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကို၏ USB အ-ဆိပ်ကမ်း၌မှီဝဲသဖြင့်, ကိရိယာအကြောင်းမေ့လျော့ကြ၏။ သို့သော်လစဉ်လတိုင်းသင်က service provider ကပေးချေရန်လိုအပ်နှင့်သင်သည်သင်၏ modem Iota နံပါတ်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
Router ကို TRENDnet တက်ချိန်ညှိခြင်း
တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ရက်ကိုအတူ router များ ပို. ပို. လူကြိုက်များလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက် data transmit နှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲဖို့, တဦးတည်းကွန်ယက်ချိတ်ဆက်အားလုံးအိမ်ပြန် devices တွေကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့ TRENDnet ရဲ့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို router များပေးဆောင်ခြင်း, ပစ္စည်းကရိယာအတွက် configuration ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ဘယ်လိုပြပါလိမ့်မယ်နှင့်အမြင်အာရုံကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သူတို့ကို configure ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြ။
Router ကို Mikrotik အတွက် firewall က configure
Mikrotik ကုမ္ပဏီများသည်အတော်လေးရေပန်းစားဖြစ်ကြပြီးအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများနှင့်အတူနေအိမ်များသို့မဟုတ်ရုံးခွဲများတွင်တပ်ဆင်နေကြသည် routers ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအဓိကလုံခြုံရေးအလုပ်ကိုစနစ်တကျ firewall ကပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပြိုကွဲရာမှကွန်ယက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုမှာ parameters များနှင့်စည်းမျဉ်းများအစုတခုလည်းပါဝင်သည်။
Wi-Fi ကို signal ကို router ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ဘယ်လို
မဟုတ်အမြဲတမ်း Wi-Fi ကို router ကိုပေးသည်သောအချက်ပြမှု၏အရည်အသွေး, တည်ငြိမ်ရေးနှင့်အစွမ်းထက်။ ကိရိယာနှစ်ခုကိုပင်သေးငယ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းနှင့်ဆင်းရဲသောဖြစ်ပါတယ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု၏တူညီသောအာဏာကိုအဆင့်မှာရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများအတွက်အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အများအပြားရှိပါတယ်, ပြီးတော့ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။
Router ကို D-Link DIR-320 ၏ configuration
ကွန်ယက်ကိုထုတ်ကုန်၏ပိုင်ရှင်များမကြာခဏ router ကို configure ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်။ အခက်အခဲများအထူးသဖြင့်အလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖျော်ဖြေဖူးဘူးသူကိုအတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်ပေါ်ထွန်း။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် router ကိုမှချိန်ညှိလုပ်ပုံကိုသရုပ်ပြမည်, နဲ့ D-Link ကို DIR-320 များ၏ဥပမာတစ်ခုပေါ်မှာဤပြဿနာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
တစ်ဦးသည် router ZyXEL Keenetic အပေါ်ဆိပ်ကမ်းများဖွင့်လှစ်
ZyXEL ကုမ္ပဏီပစ္စုပ္ပန်နှင့် router များစာရင်းကိုအရာအတွက်, အမျိုးမျိုးသောကွန်ယက်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စေ့စပ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နီးပါးတူညီ firmware ကိုမှတဆင့်ပြင်ဆင်ထားသော, သို့သော်ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးဆွေးနွေးရန်မည်မဟုတ်, နှင့် port forwarding ကို၏လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
သင်၏လက်နှင့်အတူ modem များအတွက် antenna
ကျွန်တော်တို့အတော်များများရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့နှငျ့ "World Wide Web" ကို access ကိုခွင့်ပြုတော်မူသောမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများမှထိုကဲ့သို့သော modems devaysa အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတာဘရော့ဘန်းကြိုးအင်တာနက်နှင့်မတူဘဲ, ထိုကဲ့သို့သော devices များအတွက်အများအပြားအားနည်းချက်များရှိသည်။ သူတို့တွင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် - ပတ်ဝန်းကျင်၌ဤအထူး signal ကိုဝါဒဖြန့်။
တစ်ဦး router ကို ASUS က RT ကို-N14U configure လုပ်နည်း
ASUS က '' ကုန်ပစ္စည်းအစုစုအတွက်အရေးပါသောနေရာအရပ်ကွန်ယက်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများယူထားသော။ ဘတ်ဂျက်ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ထို့ထက် ပို. အဆင့်မြင့်ရွေးချယ်စရာအဖြစ်ပေးအပ်သည်။ RT-N14U Router ကအဆုံးစွန်သောအမျိုးအစားသို့ကျရောက်: Router ကို၏လိုအပ်သောအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအပြင်, ကို USB-modem များကအင်တာနက်ကိုဝေးလံသောဒေသခံတစ်ဦး disk ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ cloud storage ကို၏ထို option ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
Wi-Fi ကိုနည်းပညာရေဒီယိုလိုင်းများမှတဆင့်ကြိုးမဲ့ devices များအကြားတိုတောင်းသောအကွာအဝေးကျော်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်များ၏ဂီယာခွင့်ပြုပါတယ်။ တောင်မှသင့်ရဲ့ Laptop ကိုရိုးရှင်းတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးများ၏အကူအညီဖြင့်ကြိုးမဲ့ access point ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် built-in ကဒီအလုပ်တစ်ခုကို၏အကောင်အထည်ဖော်ရန်ထူထောင် Windows ကိရိယာတွေ။
Routers များကို Beeline ၏ Proper configuration ကို
အခြားအင်တာနက်ပံ့ပိုးသူနှင့်အတူတစ်ဦးတန်းတူတွင်အသုံးပြုသူများမကြာခဏကုမ္ပဏီ Beeline ထံမှပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါ။ ဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းမှာတော့ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု၏တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးများအတွက် router ကို configure ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ သီးသန့်အသစ်က router များ၏မော်ဒယ်များဒါမှမဟုတ် firmware ကိုတစ်ဦး updated version ကို install လုပ်ထားခဲ့ပြီးသောသူတို့သည် router ကို Beeline ယနေ့တွင် Beeline ကွန်ယက်ကိုအလုပ်ထချိန်ညှိခြင်း။
Configuring router များ D-Link ရဲ့
D-Link ကွန်ယက်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများ၏ထုတ်လုပ်မှုပါဝင်နေသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏စာရင်းကို router များ၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြစ်ကြသည်။ အခြားမည်သည့်အလားတူပစ္စည်းကဲ့သို့ပင်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မတိုင်မီထိုကဲ့သို့သော router များတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံကို web interface မှတစ်ဆင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ WAN-connection ကိုနှင့်ကြိုးမဲ့ access point ပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူကျောင်းအုပ်ကြီးချိန်ညှိမေးကြည့်ပါ။